गुलाबी halite: विशेषताहरु, गठन, उपयोग र धेरै धेरै | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 20/10/2021 10:00 | भूविज्ञान
Halite नुन को प्राकृतिक रूप हो। यो एक धेरै सामान्य र धेरै प्रसिद्ध खनिज हो किनकि यो गहिराई मा अध्ययन गरीएको छ। यसको एक किस्म हो गुलाबी halite। ठोस जनता र भंग समाधानहरु महासागरहरु र नुन तालहरुमा पाइन्छन्। यो व्यावसायिक उपयोग को लागी धेरै महत्व को छ र यसको जिज्ञासा को लागी अधिक मांग मा छ।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई गुलाबी halite को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं, यसको विशेषताहरु र उपयोगहरु के हुन्।
1 गुलाबी halite
2 मुख्य विशेषताहरू
3 गुलाबी halite को उपयोग गर्दछ
4 यो कहाँ अवस्थित छ?
नुन युक्त भित्री तालहरु सुक्खा क्षेत्रहरुमा अवस्थित छन् र समुद्री सतह भन्दा तल कुनै आउटलेट बिना हुन सक्छ। यी तालहरु सुख्खा मौसममा वाष्पीकरण हुन्छन्, जसले पानी को स्तर मा गिरावट र लवणता मा वृद्धि को कारण बनाउँछ। जब यो हुन्छ, नुन बाष्पीकरण ताल को किनार मा गठन हुनेछ। यो तब पनि हुन सक्छ जब नुन ताल बाट सहायकहरु लाई मानव र कृषि उपयोग को लागी डाइभर्ट गरिन्छ, जसको कारण ताल सुक्छ र बाष्पीकरण भएको किनार मा अतिरिक्त नुन बनाउँछ। धेरै आन्तरिक तालहरु सुकेका छन्, नुन को खानीहरु को एक ठूलो मात्रा को पछि छोडेर कि व्यावसायिक रूप बाट शोषण गर्न सकिन्छ।
गुलाबी halite गैर शुष्क क्षेत्रहरुमा पनि अवस्थित छ र गहिरो भूमिगत जम्मा पुग्न सक्छ। भूमिगत चट्टान नुन भण्डार सामान्यतया नुन तह मा प्वाल ड्रिलिंग र तातो पानी, जो चाँडै नमकीन पानी मा नुन भंग गरीएको द्वारा हटाइन्छ। ब्राइन भंग नुन संग संतृप्त छ र त्यसपछि निकालीन्छ। ब्राइन वाष्पीकरण, क्रिस्टलाइज र बाँकी नुन स collect्कलन। धेरै जसो ब्यापारिक रुपमा उपलब्ध चट्टान नुन कच्चा प्राकृतिक क्रिस्टल को सट्टा वाष्पीकरण कटु बाट बनेको छ। रक नुन पनि नुन स्प्रिंग्स बाट वाष्पीकरण द्वारा बनाईएको छ। नुन स्प्रिंग्स मा नुन को पानी माटो देखि नुन को जलाशय मा बग्छ र गोल गोलाकार पदार्थ मा वर्षा हुन्छ।
टेक्सास र लुइसियाना जस्तै केहि भूमिगत नुन खानहरुमा, नुन भूमिगत बलहरु द्वारा नरम माटो को माध्यम बाट धकेलिएको छ, एक धनुषाकार संरचना गठन एक नुन गुम्बज भनिन्छ। यी निक्षेपहरु पनि नुन खानी सञ्चालन को एक महत्वपूर्ण स्रोत हो र धेरै अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाहरु हुन्।
यद्यपि रक नुन को रंग सरगम ​​अशुद्धता को कारण हुन सक्छ, गाढा नीलो र बैजनी वास्तव मा क्रिस्टल जाली मा दोष को कारण हो। गुलाबी र धेरै सुक्खा ताल चट्टान नुन नमूनाहरु को गुलाबी विभिन्न शैवाल ब्याक्टेरिया को कारण हो।
संतृप्त ब्राइन समाधान वाष्पीकरण गरेर, कृत्रिम चट्टान नुन सजिलै क्रिस्टल मा बदल्न सक्छ। ब्राइन वाष्पीकरण र क्रिस्टल बढ्दै जाँदा, एक कीप आकार क्यूब उत्पादन गर्न सकिन्छ। बजार मा केहि चट्टान नुन नमूनाहरु वास्तव मा क्रिस्टल कृत्रिम रूप मा यस तरीका मा हुर्कन्छन्।
गुलाबी halite को उपयोग गर्दछ
रक नुन टेबल नुन को स्रोत हो। चट्टान नुन को विशाल निक्षेपहरु नुन निकाल्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। नुन धेरै उपयोगहरु छन् र माग पूरा गर्न को लागी ठूलो मात्रा मा निकालीनु पर्छ। यसको सबैभन्दा सामान्य प्रयोगहरु मध्ये केहि खाना स्वाद, सडक सुरक्षा हिउँ र बरफ पिघ्न को लागी हो, जस्तै पशुधन को लागी नुन (जो पशुहरुलाई नुन प्रदान गर्दछ, जो उनको स्वास्थ्य को लागी महत्वपूर्ण छ), र औषधीय प्रयोजनहरु को लागी। रक नुन पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खनिज तत्व, सोडियम र क्लोरीन हो।
यो कहाँ अवस्थित छ?
चट्टान नुन धेरै ठाउँहरु बाट आउँछ र त्यहाँ दुनिया भर मा विशाल नुन खानहरु छन्। जे होस्, नुन खानहरु को ठूलो संख्या मा विचार, राम्रो नमूनाहरु स्पष्ट रूप देखि सामान्य छैन। म्याट्रिक्स मा उत्तम घन एक पटक साल्जबर्ग, अस्ट्रिया बाट आउनुभयो, जबकि ठीक क्रिस्टलहरु, विशेष गरी नीलो क्रिस्टल, स्टेसफोर्ड, हेसन, जर्मनी मा नुन को खानी बाट आए। पोल्याण्ड मा धेरै प्रशस्त नुन खानीहरु छन्, जस मध्ये केहि सयौं बर्षहरु को लागी अस्तित्व मा छन् र नमूनाहरु को उत्पादन गरीएको छ। यी Inowroclaw, Lubin, Wieliczka, र Klodawa सामेल छन्। अन्य क्लासिक यूरोपीय क्षेत्रहरु Agrigento, सिसिली, इटाली मा ला Carmuto सामेल छन्; र Alsace, फ्रान्स मा Mulhouse, जहाँ यो रेशेदार नसहरु को रूप मा देखिन्छ।
इजरायल र जोर्डन मा मरेका समुद्रहरु बिस्तारै वाष्पीकरण भैरहेका छन् र उनीहरुको किनारहरु घट्दै जारी छन्। यो को बृद्धि को लागी नेतृत्व गर्दछ धेरै रोचक चट्टान नुन पहिले नै पानी को नजिक क्रिस्टल गठन। संयुक्त राज्य अमेरिका मा, त्यहाँ न्यूयोर्क, मिशिगन, ओहियो, कान्सास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, र लुइसियाना मा विशाल भूमिगत निक्षेपहरु छन्, र वाणिज्यिक नुन खानी यी राज्यहरुमा हुन्छ। दुबै डेट्रोइट, मिशिगन र क्लीभल्याण्ड, ओहायो शहर को सीधा तल चट्टान नुन खान उत्पादन।
गुलाबी halite निक्षेप द्वारा बनाईएको हो पानी मा भंग नमक को उच्च सांद्रता को वर्षा। यस अवस्थामा, एक कम वाष्पीकरण दर र एक पानी प्रतिस्थापन दर एक कम ऊर्जा ब्राइन मध्यम एक अपेक्षाकृत छोटो भूवैज्ञानिक समय मा आवश्यक छ।
तथाकथित गुलाबी हिमालयन नुन को उत्पत्ति मा, लगभग 255 मिलियन वर्ष पहिले Mesozoic युग मा बाष्पीकरण तलछट गठन गरीएको थियो, विशेष गरी Triassic मा। लगभग 75 मिलियन वर्ष पहिले, Cretaceous अवधि को समयमा, एसियन र भारतीय प्लेटको टक्करले ओरोजेनिक बेल्ट बनायो, जसलाई आज हिमालय भनिन्छ। यस प्रक्रिया को दौरान, बाष्पीकरण उत्पत्ति को नुन पानी निक्षेप सहित केहि निक्षेपहरु, साना क्षेत्रहरु मा केन्द्रित भएको थियो, चट्टान नुन खनिज को एक उच्च अनुपात संग निक्षेप को परिणामस्वरूप।
यो पानी मा भंग गर्न सकिन्छ र एक स्व-निर्मित खनिज पानी को तयारी को रूप मा प्रयोग गरीन्छ, र एक विशेष ग्राइन्डर संग भान्सा मा "टेबल नुन" को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जर्मन स्वास्थ्य मन्त्रालय यस नुन मा ट्रेस तत्वहरु को 10 विभिन्न प्रकार सम्म पत्ता लगाउन सक्षम भएको छ, 98% को सोडियम क्लोराइड सामग्री संग (जसले यसलाई एक अपरिभाषित नुन बनाउँछ)। NaCl पछि उच्चतम सामग्री म्याग्नेशियम (०.0,7%) हो। यो कहिले काहिँ कोषेर नुन को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। जब समारोह वा मात्र सजावट को लागी प्रयोग गरीन्छ, यो नुन बत्ती को निर्माण मा पाउन सकिन्छ। यो केहि औषधि अनुप्रयोगहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ, तर यो कुनै अन्य नुन बाट फरक छैन।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाइँ गुलाबी halite र यसको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » भूविज्ञान » गुलाबी halite
ध्वनि को गति